जरिवानामा पर्दा पनि रमाइलो मान्ने विवेक ओबरोय
नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन ९, २०७७, १३:०८
काठमाडौं- बलिउडका चर्चित कलाकार विवेक ओबरोय ट्राफिक नियम मिच्दा पाँच सयको जरिवानामा परेका छन्। हेलमेट र मास्क नलगाई बाइक चलाउँदा उनि जरिवानामा परेका हुन्।
मुम्बई पुलिसले उनलाई हेलमेट किन नलगाएको र मास्क खै ? भन्दै केरकार गर्दै पाँच सयको चलान काटेर छाडिदिएको थियो। यो कुराले विवेकलाई भने रमाइलो लागेको छ।
उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा रमाइलो पारामा आफूलाई मायाले कुन मोडमा ल्यायो भन्दै लेखेका छन्-
निक्लिएका थियौं, नयाँ बाइकमा म र मेरी जान
अफसोच, पुलिसले काटिदियो चलान।।
बाइक चलाउने त्यो पनि बिना हेलमेट ?
प्रहरीले गर्नसक्छ है चेकमेट।।
विवेकले मुम्बई पुलिसलाई मेन्सन गर्दै धन्यवाद पनि दिएका छन्। आफूलाई सुरक्षित भएर यात्रा गर्न निकै महत्वपूर्ण छ भन्नेकुरा सम्झाएकाले उनि प्रहरीप्रति नतमस्तक बनेका हुन्।